Sary hosodoko menaka Patrick Kramer ao amin'ny "Reflection and introspection" | Famoronana an-tserasera
"Reflection and Introspection" amin'ny solika avy amin'i Patrick Kramer
Ny roa herinandro lasa izay dia niatrika hatsarana kanto kokoa amin'ny hosodoko solika, akrilika na pastel izahay, tsy hadino na ny loko vita amin'ny rano. Karazan'asa efa nahazatra anay avy amin'ny kilasika lehibe amin'ny sary hosodoko Ary tsy maharary ny mahatsiaro indraindray, toy ny mitranga amin'ny sary hosodoko solika ankehitriny izay mitady idealy na tanjona hafa.
Mitranga izany amin'ny "Reflection and Introspection" nataon'i Kramer, sary hosodoko menaka azo tanterahina sarotra ny mahita an'io antsipiriany io izay ny eritreritsika dia manamafy fa miatrika sary hosodoko isika fa tsy sary. Raha mikaroka ianao dia mahita, fa ny tena izy dia sarotra be, satria i Patrick Kramer dia mifehy tsara ny lafin-javatra rehetra amin'ity asa manokana ity.
Raha azontsika atao ny miantso an'io asa io ho toy ny zava-misy fa tsy be loatra, dia noho ny taratra izay tokony ho hita rehefa mandoko ny asa isika, zavatra nesorina ary mirona aminà zavatra tsy azo antoka kokoa, na dia mandeha mivantana amin'ny realista aza. Azontsika jerena izany amin'ny sisa amin'ny sanganasan'i Kramer, na dia mahita hyperrealism ihany koa aza isika.
Ity sary hoso-doko ity dia manana sentra miavaka amin'ny fahadiovan'ny taratra sy ny inona ny firafitra ny mannequin hazo amin'ny vy vy maka iray hafa amin'ny iray tànany. Mpanakanto mitady zoro hafa sy toerana hafa miaraka amin'ireny mannequin hazo ireny izay asehony tsara amin'ny ampahany amin'ny sanganasany ary soloina modely voajanahary.
Manana ny tranonkalany ianao avy amin'ity rohy ity, ary ao anatiny no azonao atao mahita asa bebe kokoa nataon'i Kramer. Tena ny asany rehetra dia miaraka amina kalitao tsara mba hitondrana anay sasany amin'ny fianaran'izy ireo momba ny tompon'ny sary hosodoko. Zava-dehibe ilaina ho fantatra ireo teknika ary hahafahana manampy azy ireo amin'ny fombany manokana.
Avelako ianao iray amin'ny lahatsariny izay anehoany ny fizotrany amin'ny famoronana sy ny antsipiriany:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » "Reflection and Introspection" amin'ny solika avy amin'i Patrick Kramer